अपील:नेपालमा अलपत्र परेका हङकङबासी नेपालीहरुको उद्वार गरियोस - HongKong Khabar
अपील:नेपालमा अलपत्र परेका हङकङबासी नेपालीहरुको उद्वार गरियोस
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, साउन २९, २०७८ समय: १:५१:०८
विविध कारणले नेपाल गएका हङकङका बासिन्दा नेपालीहरु हङकङ फर्किन चाहेर पनि सकिरहेका छैनन।हङकङ सरकारले अगस्ट ९ तारिखबाट लागू हुनेगरी उच्च जोखिमपूर्ण क्षेत्र मध्येको एउटा देश नेपालमा रहेका हङकङ रेसिडेन्टलाइ यदि हङकङ वा मुल भुभाग चीनमा वा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको केहि देशमा पुर्ण मात्रा खोप लगाएकोलाइ मात्र हङकङ प्रवेश गर्ने अनुमति दिएकोछ। हङकङ सरकारले आफ्नो नागरिकलाई उद्वार गर्ने यस्तो विभेदकारी निति प्रति नेपालमा फसिएका नेपाली मुलका हङकङ नागरिकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोछ। यस विषयलाई हङकङमा बस्ने नेपालीहरु जो अहिले नेपालमा अलपत्र परेकाछ्न – ले नेपाल फ्लास ( nepalflash.com) मार्फत आफ्नो कुरा सार्वजनिक गरेकाछ्न। नेपालमा अलपत्र परेका हङकङवासी नेपालीको उद्वार हुनमा सहयोग पुगोस भनेर हङकङ खबरले उक्त खुल्ला अपील (पत्र)लाई यहाँ राखेकोछ।
यतिबेला नेपालमा करिव चार सय जनाको हाराहारीमा हङकङमा बस्ने नेपाली अलपत्र अवस्थामा छन । हामीहरूमध्ये कोही आफ्नै परिवारका सदस्य गुमाएका कारण नेपाल आएका थियौँ । एकजना आमाको निधनपछि रितिरिवाजअनुसार काजकर्म गर्ने नेपाल आएका हुन । एक जना महिला खाना पनि खान नसक्ने दूधे बालक श्रीमानलाई केही दिनका लागि जिम्मा लगाएर नेपाल आइकी थिइन । उनी घुम्न होइन । मनोरञ्जनको उद्देश्यले होइन विशुद्ध पारिवारिक कामको चटारोले एक साताका लागिमात्र नेपाल आएकी थिइन । एकसातासम्म बच्चाको हेरचाह बुबाले गर्ने गरी उनी नेपाल आएकी थिइन । यस्तै यस्तै पीडा भरिएको यथार्थ छ, अहिले हामी बिचल्लीमा परेकाहरूको । परिवारसँग छुटेर अनिश्चित कालसम्म नेपाल बस्नु परिरहेको छ ।
हङकङ फर्कने पर्खाइमा बसेका नेपालीहरु
समस्या परिवार एक ठाउँ नभएकोमात्र होइन । अधिकांश नेपाली हङहङ आइडी पाएर त्यहाँ बसेका छन । उनीहरूले त्यहाँ आफ्नो रोजगारी गरिरहेका छन । कतिपयले उद्यम तथा व्यापार पनि गरिरहेका छन। घर किनेका छन । यी सबै काम गर्दा बैंकबाट ऋण लिइएको छ । तर तीन/चार महिनादेखि अलपत्र पर्दा सबैको विचल्ली हुँदै गएको छ । पेशा व्यवसाय त चौपट्ट हुने नै भयो । बैंक ब्याज तथा कर्जा चुक्ताले पिरोलिइरहेको छ धेरैलाई ।
यो यथार्थ हो । बिचल्लीमा परेका हङकङवासी जो अहिले नेपालमा छन्, उनीहरूको वास्तविक कथा हो यो । पीडा र व्यथा पनि हो यो । पीडामा मल्हम लगाउनु पर्छ । मल्हम लगाउने नेपाल सरकारले हो । हङहङमा रहेको नेपाली कन्सुलरको कार्यालयले हो । हङकङमा रहेका अनेकन नाममा संघ संगठनहरूले हो । गैरआवासायी नेपालीको हितमा काम गर्छु भनेर कुर्लने एनआरएनए हङकङले हो । तर सत्य तीतो हुन्छ । उनीहरू अहिले नेपालमा राहत-सहयोग बटुल्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गराउने काममै रमाइरहेका छन। पीडाको बोध त पीडकलाई मात्र थाहा हुँदो रहेछ । अहिले हामी पीडितहरू नेपालमा अलपत्र परिरहेका छौँ । अब त भरै के खाने र कहाँ बस्ने भन्ने अवस्थामा धेरैजना पुगिसकेका छौँ ।
प्रवासमा रहेका नेपालीहरूलाई परिआएको बाधा व्यवधान फुकाउने र उनीहरूको उद्धार तथा रेखदेख गर्न खोलिएको हो कन्सुलर कार्यालय । हामी नेपालमा बिचल्लीमा परेकाहरूले कन्सुलर कार्यालयमा लगातार सम्पर्क बढाएका छौँ । तर उताबाट खासै पहल भएको छैन । अझ भन्नुपर्दा सकारात्मक रेस्पोन्स पनि हुने गरेको छैन । विपदमा र असहज अवस्थामा सहायता नगर्ने भए किन चाहियो कन्सुलर कार्यालय ?
गैरआवासीय नेपाली संघ हङकङ पनि छ । अनेक जाति र समुदायका फरक फरक संस्थाहरू पनि खुलेका छन । ती सबै संस्थाहरूमा भोजभतेरका काम कार्यक्रममा भिड नै लाग्ने गरेको देखिएको छ । तर नेपालमा अलपत्र भएको महिनौँ भइसक्दा पनि ती निकायहरू कानमा तेल हालेर बसेका छन । उनीहरू कोभिड महामारीलाई एउटा उपयुक्त बहाना बनाएर सामाजिक सेवा गरेको देखाउन र आफू त्यसमा देखिँन तल्लीन छन ।
नेपालबाट हङकङ उडान भर्ने क्रममा विगतमा त्रुटि गरिए होलान । नक्कली पिसिआर रिपोर्टको सहारामा नेपाली त्यता पठाइएको खबर हामीले पनि सुनेका थियौँ । त्यो गलत काम अहिले अलपत्र परेका हामीले गरेका होइनौँ । त्यसो हुँदा हामी किन आफूले नगरेको गलत कामको सजाय भोग्न बाध्य भइरहेका छौँ ?
नेपाल सरकारको परराष्ट्र र नागरिक उड्ययन मन्त्रालयले हाम्रो पीडामा मल्हम लगाउने काम गरोस । हङकङसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गरी हामीलाई कर्मभूमि फर्कने वातावरण शीघ्र मिलाइयोस । हामीले परिस्थितिलाई पनि बुझेका छौँ । विश्व अवस्थाबारे पनि जानकार छौँ । त्यसैले खोप लगाएका छौँ । खोप लगाएको क्यूआर कोडसहितको रिपोर्ट कार्ड पनि लिएका छौँ । अब मात्र कूटनीतिक पहल चाहिएको छ । सके नियमित उडान सुचारु होस । तत्काल त्यो संभव नभए अलपत्र परेका हामी नेपालीका लागि चाडर्ट फ्लाइटको व्यवस्था गरियोस ।
यस खुल्ला अपील जारिकर्ताको नाम र आइडी नम्बरहरु
1. Pun Tej Kumar P5806**(*)
2. Gurung Chandra Prakash R5972**(*)
3. Gurung Yubraj R7944**(*)
4. Pun Radha P7251**(*)
5. Gurung Tirtha Kumari P7898**(*)
6. Thapa Laxman P7968**(*)
7. Gurung Kabita P7583**(*)
8. Gurung Sujata R6831**(*)
9. Gurung Gopal Chandra P6644**(*)
10. Gurung Rajani F0001**(*)
11. Gurung Khem Kumar P8345**(*)
12. Gurung Sagar Y8630**(*)
13. Gurung Nar Prasad P7516**(*)
14. Gurung Ram Bahadur M5175**(*)
15. Gurung Dil Maya P8223**(*)
16. Dura Aaska S9217**(*)
17. Gurung Calvin S2547**(*)
18. Jwarchan Sarad R9637**(*)
19. Gurung Tularal P8090**(*)
20. Gurung Tej Bahadur P8085**(*)
21. Gurung Sonika Visa EOEN-5004*****
22. Gurung Purna Kumari Visa EOEN 500361****
23. Malla Lal Kumari M105***(*)
24. Malla Ram Bahadur M1054**(*)
25. Malla Sabita P6350**(*)
26. Malla Sajit M72460***
27. Malla Shashila R5815***
28. Khand Divya R7102***
29. Rai Ganga P6041****
30. Limbu Sumpoon S3556****
31. Rai Ram P587****
32. Limbu Yamna Z5175***
33. Khima Devi Limbu P6889***
34. Pranish Gurung R7320***
35. Sita Gurung Visa EOEN-5001777*****
36. Hanuel Gurung Visa EOEN-5001754***
37. Rana Mamta R57281***
38. Thapa Anita WX5047***
39. Gurung Jamuna P6164***
40. Mohan Limbu Y7149***
41. Limbu Ganga Maya M8564***
42. Limbu Dilip R5925***
43. Poudel Jyoti M4602***
44. Gurung Nita R918****
45. Rai Nirmal Kumar P7593***
46. Rai Menuka Devi P7100****
47. Gurung Sima Visa EOEN-5003278-***
48. Gurung UpendraVisa EOEN-500324*-**
49. Bagale Ale Samjhana M600****
50. Gurung Saanjaay Kumar P8876***
51. Gurung Bindu Kumari R62727***
52. Gurung Bhagmati P5540***
53. Gurung Anupa R3391***
54. Limbu Om Prakash P8072***
55. Limbu Bishnu maya P5977***
56. Rai Menuka R5410****
57. Gurung Karna Bahadur Visa EOEN-5012538-***
58. Tara Bahadur pun P5850****
59. Prashant Lama Y880****
60. Sunwar Richard P727****
61. Rai Dipen R9325***
62. Thapa magar Judhabir P8399***
63. Armaja Lal Bahadur P6323***
64. Malla Yam Bahaadur P7917***
65. Khatri Sita Devi P7237***
66. Malla Keran R1166***
67. Khatri Uzedi M7371***
68. Chhetri Shova M737***
69. Gurung Bhim Bahadur P750***
70. Khatri Suresh Bahadur P874***
71. Gurung Rojani M2805***
72. Gurung Ashish P620****
73. Gurung Gagan M228****
74. Khatri Ram Bahadur M3677****
75. Sita Maya Onem P6049****
76. Limbu Yasuda Onem P4610****
77. Tamang Dev Prasad R6744****
78. Shanti Kala Limbu P7951****
79. Limbu Nimala P4353****
80. Limbu Lokemdra P6272****
81. Limbu Pyari M4543****
82. Limbu Vesraj R2650****
83. Limbu Heena M3854****
84. Gurung Sanjana WX4866****
85. Limbu Lokraj P4876****
86. Amrit Gurung M3838****
87. Shanta Rai P6094****
88. Arpana Rai R0793****
89. Ankit Gurung M383****
90. Chin Prasad Gurung M2634****
91. Andrea Gurung (baby) S8705****
92. Sukharatna Rai R4074****
93. Uma Rai Tamang M4203****
94. Pandey Upendra M2789****
95. Limbu Chandra Kumari P7042****
96. Rana Man Maya R0922****
97. Gurung Chandrai R5232***
98. Limbu Devikala R7795***
99. Gurung Dil Bahadur R3831**(*)
100. Lama Jas Bahadur M0074**(*)
101. Khatri Dinesh F0422**(*)
102. Gurung Megha R7622**(*)
103. Gurung Himchali M1881**(*)
104. Gautam Suman R8016**(*)
105. Gurung Ram Bahadur R8799**(*)
106. Pamfa Rai R4604**(*)
107. Rai Tika Devi P6568**(*)
108. Limbu Ran Kumari F0273**(*)
109. Limbu Kamala WX4740**(*)
110. Limbu Nevona S9205**(*)
111. Menkhu Gurung R5366***
112.Dipshreekha siwa P6264***